Rolọ ọrụ Ferroalloy - Feng Erda Group
Tengzhou Delifu Nkedo Materials Co., Ltd., a enyemaka nke FENG ERDA GROUP. E guzobere ya na 2009, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 320 nwere ọnụ ahịa mmepụta kwa afọ nke 660 nde yuan. E nwere usoro mmepụta akpaka isii, ngwaahịa ndị bụ isi bụ: (usoro chromium GB3683-2008) carbon-ferrochromium, obere carbon ferrochromium, micro-carbon ferrochromium, (usoro manganese GB3795-2006) , obere-carbon ferromanganese, (inoculant system) ferrosilicon inoculant, silicon-barium inoculant, Silicon-Barium-calcium inoculant, (carbonizer system), ihe mgbakwunye carbon nke coke na na.
Ferroalloy mmepụta akara
Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe, ọ na-a magburu onwe soplaya ígwè na ígwè ụlọ ọrụ. Karịsịa na imepụta akwa nchara na akụkụ nchara, Alloy Dep. "akwa chromium, chromium dị ala, micro chromium" na - egosi uru na njirimara pụrụ iche ya - agwa kwụsiri ike, ihe mejupụtara, ọnụọgụ dị elu. N'ime ụlọ ọrụ iji guzobe ezigbo onyonyo, nweta aha ọma.
N'ihi ụkọ ego, osisi mmepụta dị "Shizuishan City, Ningxia" na "Baotou City, Inner Mongolia". Site na njikọta na nnweta na ngwakọta, DELIFU CASTING abụrụla nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nwere "ezigbo mma, nchekwa gburugburu ebe obibi, nnukwu na ogo dị elu". Site n'enyemaka nke ikpo okwu na ike nke ụlọ ọrụ ahụ, a na-ebubata 85% nke ngwa chromium na manganese site na ụlọ ọrụ ndị ama ama si mba ofesi mara nke ọma iji hụ na nkwụsi ike nke ngwaahịa na akụrụngwa.